Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU Minnesota o isugu yimid shir loogu gogol xaadhayo Riwaayad ay soo wadaan.
Ururka OYSU Minnesota o isugu yimid shir loogu gogol xaadhayo Riwaayad ay soo wadaan.
Ururuka dhalinyarada Ogaden Youth Students & Union OYSU ee Gobolka Minnesota oo Maanta isugu yimid Kulan qiimo badan, oo ay ugu gogol xaadhayeen hawlaha soo wajahan waqtigan kulaylaha ee ay eegga galeen. Shirkan oo ay kahadleen dhamaan hayaadaha kala duwan ee ururku leyahay ayaa waxaa lagu bilaabay sida dhaqanka & caadada u ah halgamayaasha reer Ogadenia aayadaha quraanka kariimka ah, Kadib ayaa waxaa shirka la wareegay Gudiga dhalinta oo kawarbixiyay meelaha ay marayaan hawlaha dhalinta & Guulaha kala duwan ee u gaadhay Halganka Xornimada doona ah ee ay higsanayaan Ummada reer Ogadenia.
Dhalinyarada ayaa manta waxay isla jajabiyeen, islana qaadaa dhigeen sadex qodob oo ugu horaysa Agendaha uyaala kuwaas oo kala ahaa Riwaayad caalami aha oo ay dhalinyaradu ku qaban doonaan Gobolka Minnesota Bilaha inagoo soo foolka leh, Habkii dhaqaale loogu abuuri lahaa looguna garab istaago ummada dhibaataysan ee reer Ogadenia & Jabhada xaq udirirka ah ee Radinaysa xaqii umadooda la duudsiyay. Dhalinyarada O.Y.S.U ee Gobolka Minnesota ayaa Soo wada Riwaayad aad u wayn oo lamagac baxday, “Gadoodkii Shacabkeena & Gurmadkii Halganka” ayaa baryahan ay kujiraan udiyaar garow dheeraad aha oo aad loo agaasimay, iyadoo ay sugi la’yihiin dhamaan bulshada kunool gobolkaas, Riwaayadan oo taaban doonta xogta dhabta ah ee kajira Ogadenia, ayaa larajaynayaa inay qabsoomi doonto Summerka dhaxdiisa hadii alle Idmo.
Kalhore ayay ahayd markii Xidigaha dhalinta OYSU EE gobolkan Minnesota ay soo bandhigeen Riwaayadii lamagac baxday “Magayee Guumaysiga Gayigeena aan ka xorayno” oo ay aad oogu diirsadeen dhamaan bulshada Soomaliyeed ee kasoo jeeda dacalada dunida. Gababadii & Gunaanadkii shirkan maata ayaa waxay dhalintu isku raacaan inay hal meel ooga soo horjeedsadaan Nacabkan guunka ah ee haysta Dhulkooda hooyo, Guntigana dhiisha ka dhigaan si hufana u wada qabtaan hawlaha uyaala ururka. Waxayna isla garteen in Guumaysigan guunka ah uuna ahayn geed ka dul baxay Ogadenia ee uu goor dhaw baqooli doono kuna laaban doono Kobtii uu kasoo baqoolay iyagoo halku dhagoodu ahaa Gooshbay kutimee kow dheh Waa gaajo socotee Goojaan ku celiyaan.